Recetin सम्पादकीय टीम | रेसिपी
रिसेटिन एक हो खाना पकाउने विधिहरूका बारे वेबसाइट विशेष रूपमा बच्चाहरूको लागि डिजाइन गरिएको। धेरै आमाहरूका लागि धेरै सामान्य समस्या प्रत्येक दिनको लागि मेनू तयार गर्दा हो। आज म के पकाउँदैछु? म कसरी त्यसो गर्छु मेरा बच्चाहरूले तरकारीहरू खाए? म कसरी तयार गर्न सक्छु मेरो बच्चाहरूको लागि सन्तुलित र स्वस्थ आहार? त्यो प्रश्न र अरू धेरैलाई जवाफ दिन, रेसिटनको जन्म भयो।
हाम्रो वेबसाइटमा सबै रेसिपीहरू शेफले तैयार गरेका छन् जो बाल पोषणमा विशेषज्ञ छन्, त्यस्तै अभिभावकसँग सबै ग्यारेन्टीहरू हुन्छन् एक स्वस्थ र स्वस्थ भान्साकोठा तयार हुन। यदि तपाईं यस वेबसाइटको अंश बन्न चाहानुहुन्छ र हामीसँग तपाईंको रेसिपीहरू प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले गर्नु पर्दछ निम्न फारम पूरा गर्नुहोस् र हामी सकेसम्म छिटो तपाईं संग सम्पर्क मा हुनेछौं।
के तपाई खोज्न चाहानुहुन्छ? हाम्रो भान्सेको टोली? ठिक छ, यहाँ हामी दुबै व्यक्तिहरुलाई प्रस्तुत गर्दछौं जुन अहिलेको टोलीका सदस्य छन् र विगतमा हामीसँग सहयोग पुर्‍याएकाहरू।
मसँग विज्ञापन र सार्वजनिक सम्बन्धमा डिग्री छ। मलाई खाना पकाउन, फोटोग्राफी गर्न र मेरा पाँचवटा साना बच्चाहरूको आनन्द लिन मन पर्छ। डिसेम्बर २०११ मा मेरो परिवार र म परमा (इटाली) स moved्यौं। यहाँ म अझै स्पेनिश पकवान बनाउँछु तर म यो देशबाट विशिष्ट खाना पनि तयार गर्दछु। म आशा गर्दछु कि तपाईं घरमा तयार पार्नुहोस् जस्तो भाँडा माझेको हुन्छ, सँधै सानाको आनन्दको लागि डिजाइन गरिएको।
म भान्साकोठाको र निर्दिष्टीकरणको खास गरेर विश्वासयोग्य हुँ। धेरै वर्षदेखि मैले मेरो धेरैजसो व्यंजनहरू तयारी गर्ने, अध्ययन गर्ने र रमाइलो गर्ने केही समय बिताएको छु। म दुई बच्चाहरूको आमा हुँ, बच्चाहरूका लागि पकाउने शिक्षक हो र मलाई फोटोग्राफी मन पर्छ, त्यसैले यो रेसिपीका लागि सबै भन्दा राम्रो पकवानहरू तयार पार्न धेरै राम्रो संयोजन बनाउँछ।
म खाना पकाउने बारेमा भावुक छु, र मेरो विशेषता डेसर्टहरू हो। म स्वादिष्ट व्यक्तिहरू तयार गर्दछु, उनीहरूसँग बच्चाहरूले प्रतिरोध गर्न सक्दैनन्। के तपाइँ रेसिपीहरू जान्न चाहानुहुन्छ? त्यसोभए मलाई पछ्याउन नहिचकिचाउनुहोस्।
म १ 1976 XNUMX मा अस्टुरियसमा जन्म भएको थिएँ। म संसारको नागरिक हुँ र म यहाँ र मेरो सुटकेसमा फोटोहरू, स्मृति चिन्हहरू र रेसिपीहरू बोक्छु। म एउटा परिवारसँग सम्बन्धित छु जहाँ मजाको पलहरू राम्रो र नराम्रो टेबुल वरिपरि घुम्दछन्, त्यसैले म सानो भएदेखि मेरो जीवनमा भान्छा उपस्थित छ। यस कारणले गर्दा, म व्यंजनहरू तयार गर्दछु ताकि साना बच्चाहरू स्वस्थ हुनुहोस्।
मेरो नाम इरेन हो, म म्याड्रिडमा जन्मेको थिएँ र मँ पागलपनको साथ पूजा गर्ने र खाने खान मन पराउने, नयाँ भाँडा र स्वाद प्रयोग गर्ने बच्चाको आमा हुने ठूलो भाग्य पाएको छु। १० भन्दा बढी बर्षदेखि म सक्रिय रूपमा विभिन्न ग्यास्ट्रोनमिक ब्लगमा लेख्दै छु, जसमध्ये निस्सन्देह, Thermorecetas.com बाहिर छ। यस ब्लगिging संसारमा मैले एउटा अद्भुत ठाउँ पत्ता लगाएको छु जसले मलाई महान व्यक्तिहरूसँग भेट्ने अनुमति दिन्छ र मेरो छोराको आहारलाई उत्तम बनाउनको लागि व्यञ्जनहरू र तरिकाहरूको अनन्तता सिक्छ र हामी दुवैले सँगै स्वादिष्ट खाना बनाएर खान र रमाइलो गर्छौं।